गोरेसँगको उठबसले उर्लाबारीका ठूलाबडाको निदहराम ! - www.kchhakhabar.com
गोरेसँगको उठबसले उर्लाबारीका ठूलाबडाको निदहराम !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २५, २०७५ समय: १४:०९:२३
मधुमल्ला । बहुचर्चित सुन काण्डका मुख्य नाइके मानिएका चुणामणि उप्रती (गोरे) सँग दिनहुँ निकटतामा रहेका कारण उर्लाबारी र आसपासका केही ब्यक्तिहरु पनि शंकामो घेरामा तानिएका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार गोरेसँग साँठगाँठ र कारोबार गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा ठालु र नवधनाढ्यको रुपमा चिनिएका ती ब्यक्तिहरुलाई प्रहरीले निगरानी राखिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
गोरेले स्थानीय राजनीतिक अगुवादेखि यहाँका केही सुन ब्यापारी र होटल तथा ठेक्कापट्टामा लगानी गरेका ब्यक्तिहरुसँग उठबस गर्दै आएको खुलेकाले अनुसन्धान त्यसतर्फ मोडिएको छ । प्रहरीले फेला पारेको गोरेको हिसावकितावको लेजरमा रहेका सबै नामहरुमा प्रहरीले अनुसन्धान बढाउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार गत स्थानीय तहको चुनावमा केही उम्मेद्वार भेष्टलगायत प्रचार सामाग्री खर्च गोरेले उपलब्ध गराएको पनि खुल्न आएको छ । गोरेले नगद तथा जिन्सी दिएको समेत टिपोट गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतको भनाई छ ।
यस्तै, उर्लाबारी र दमकका केही होटलमा गोरे दिनहुँ ‘जाँड पार्टी’ मा रम्नेहरुलाई पनि प्रहरीले ‘मार्क’ गरेको छ । उर्लाबारीको मन्डेदेखि दमकको वन्डरल्याण्ड र कामाक्षा होटल गोरेको अखडा भएको खुल्न आएको छ । ती होटलमा बसेर गोरेले निकटका मान्छेहरुसँग सुन तस्करीको योजना बुन्ने गरेको बताइन्छ । ससुराली झापाको कमल र स्थायी ठेगाना मोरङको उर्लाबारी–७ भएपनि गोरेको बसाई वन्डरल्याण्ड र कामाक्षा होटलमा हुने गरेको थियो । उर्लाबारीको मन्डे होटलमा भने साँझ ‘जाँड पार्टी’ गर्ने गरेका थिए ।
उर्लाबारी र दमकका केही सुन ब्यापारीहरुसँग ती होटलमै रहेर गोरेले सुनको कारोबार गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रहरीले निगरानी बढाएपछि गोरेसँग साँठगाँठ गर्ने ‘ठूलाबडा’ हरु हतास मुद्रामा देखिएका छन् । सन्देहको घेरामा रहेका ब्यक्तिहरुले गोरेसँग खानपान गरेको स्वीकारे पनि उनको कारोबारका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेका छन् । गोरेले अबैध सुनको कारोबार गर्ने गरेको थाहा भएपनि बेखबर झैं रहेर उनीसँग निकटता बढाएर लाभ लिनेहरुको लामै सूचि छ ।